Waa Maxay Mabaadii'da Nidaamka Qiime-Yar ee Maaraynta SEO?
Raadinta hab ku sahlan si aad u hesho ereyada muhiimka ah ee ku jira maadada deegaanka? Fiiri wax dheeraad ah maqaalkan! Maanta, waxaan kuu sheegi doonnaa sida loo sameeyo degaanka SEO-yada kharashka ku baxa adoo codsanaya dhowr ka mid ah qalabka xogta SEO.
Markaad maareynaysid aasaasiga asaasiga ah, waxaad ku dhajin kartaa isku miisaamidda hawlaha kale ee luqadaha ama waddanka kale ee aad rabto. Sidaas, aynu bilowno.
7 Tilmaamaha Hagaha ee Qiime-Yaraynta SEO-ga Nidaamyada:
Inuu kobciyo qoraalka Source for Local Localization
) Khabiirada hooseeya waxay kugula talinayaan in aad raacdo talaabooyinkan markaad diyaarinayso qoraalka isdaba joogga ah ee degaanka SEO:
Hubi in cufnaanta erayga muhiimka ah ay ka yartahay 2. 5%;
Ku dhex jira nuqul ka kooban erayo iyo mawduucyo badan oo kala duwan;
Oo ay ku jirto nuquladaada dhammaan ereyada muhiimka ah ee la xiriira ganacsigaaga.
Tixgeliya Abuurista Wareegga Luqadda
Talaabadani waxay u baahan tahay in aad mareyso qoraalkaaga iyo ereyada muhiimka ah, oo ay ka mid yihiin:
Ereyada muhiimka ah ee magaca;
Qodobbada muhiimka ah ee adeegga / adeegga ee leh dhammaanba u dhiganta;
Qodobbada muhiimka ah ee macluumaadka, oo ay ku jiraan qaababka wax soo saarka, arrimaha, xalalka, iyo Su'aalaha;
Ficilada, calaamadaha, iyo tilmaamaha ku sifooba ganacsigaaga;
ereyada muhiimka ah.
Marka la sameeyo tan, liiska dhammaan shuruudaha la soo saaray iyo sameynta mudo-kabad ah. Kadibna, uqor geli ereyada muhiimka ah ee aad ka heshay si aad ugu xirri karto isku-dheelitirkii ugu dambeeyay.
Ku guuleysiga cilmi-baarista muhiimka ah
Tani waxaa badanaa lagu sameeyaa adoo ku daraya mawduucyo munaasib ah luuqada bartilmaameedka ah ee shuruudaha luqadda. Waxaad ku dari kartaa mawduucyo dheeraad ah oo la xidhiidha adeegaaga iyo sidoo kale qoraalada muhiimka ah iyo qoraallada joogtada ah. Ka dib markii lagu daray, dhamaystir liiskaaga talooyinka. Xirfadleyda takhasuska leh ayaa soo jeedinaya isticmaalka ClickStream qalab si loo falanqeeyo xaddiga raadinta.
Waxyaabo kale oo aad sameyso waa inaad waydiisaa afhayeenka hooyo inuu kaa caawiyo inaad hesho cayaar inta u dhaxaysa tirooyinka ugu sareeya ee la xiriira kuwa cusub ee la helay. U sheeg dadka hooyo inay doortaan ereyga la raadinayo inta ugu badan haddii ay jiraan dhawr fursadood. Haddii ay dhacdo in uu jiro qeyb ka mid ah, waydiiso hooyo in ay u qeybiso leyliga muhiimka ah ee ereyada kala duwan, ka dibna la ciyaaro.
Raadi turjumaadaha qalabka CAT
Qalabka CAT waxay u oggolaanayaan turjubaanada in ay isticmaalaan erey-fogeyn waqtiga dhabta ah. Waxay bixiyaan muddada habboon ee ereyga mar kasta oo ay ku dhacdo qoraallada kale. Waxa intaa ka badan, qalabkani waxay leeyihiin su'aalo iyo jawaabo la dhisay oo ka dhigaya suurtogalnimada in la hubiyo in isticmaalka ereyga uu sax yahay ama qaldan yahay.
Maanta, proz. com waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay mid ka mid ah wicitaanada turjumaadda ee ugu weyn. Waxay u ogolaataa dadka isticmaala inay sheegaan shuruudaha qalabka CAT ee baaritaanka. Sheegida qaabka faylka ereyga "Termbase" waa mid aad u macquul ah maaddaama badid turjubaanada ay qiimeyn karaan sida ay u fududahay ama u adag tahay in la keeno faylka la doortay ee qalabka CAT iyaga oo isticmaalaya.
Ku qor qeyb ka mid ah qoraalka caddaynta
Isla markaad turjumaan heshay ereyada iyo odhaahaha muhiimka ah, Waqtiga si aad u abuurto meeleynta tusaaleyaha. Ujeedada howsha waa in la hubiyo in qaabka qoraalka bartilmaameedku yahay mid dabiici ah, dhammaan ereyada muhiimka ah ee tarjumaadda waa la qoray oo si sax ah loo. Tallaabada ugu dambeysa waxay ku saabsan tahay in la hagaajiyo qoraalka bartilmaameedka ah isla markaana lagu daro qaar ka mid ah ereyooyinka aan tooska ahayn ee faylka, marka loo baahdo.Sidoo kale, nadiifinta macluumaadka NAP iyo calaamadaynta qorshaha. Taasi waa.
Ma jiraan fikrado kale oo ku saabsan sida loo sameeyo kharashka ku baxa SEO-ka? Ku soo dhawow inaad la wadaagto kooxda Semtalkeeda Source . Waxaan had iyo jeer jecel nahay inaan ka maqalno akhristeyaasheena!